विश्वकै अहिलेसम्मको अनौठो विवाह
एजेन्सी । २० जना भन्दा धेरै जम्मा हुन नपाइने नियमलाई पूर्णरुपमा पालना गरेर १० हजार निम्तालुलाई भोज भतेर सहितको विवाह गरियो । कसरी ?
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरस महामारीले ठूलो समारोहबीच बिहे गर्ने धेरै जोडी र उनीहरुको अभिभावकको चाहानालाई पुरा हुन दिएको छैन । विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि लकडाउन चलिरहेको छ भने लकडाउन नभएका देशमा पनि भिडभाड गर्न दिइएको छैन।
उदाहरणको लागि मलेसियामा एक ठाउंमा २० जना भन्दा धेरै मान्छे जम्मा हुन नपाउने नियम लगाइएको छ । त्यसले गर्दा विवाह जस्ता सामाजिक समारोहमा भीडभाड हुने त कुरै भएन । तर जहां इच्छा त्यहां उपाय मलेशियाको एक युगल जोडीले अस्ति आइतबार २० जना भन्दा धेरै जम्मा हुन नपाउने लगायतको प्रतिबन्धसम्बन्धी नियमहरु र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षित तरिकालाई पूर्णरुपमा पालना गरेरै आफ्नो बिहेमा दश हजार निम्तालुलाई स्वागत गरेका छन्, र भोज खुवाएका छन् ।
तपाईलाई लाग्ला, त्यो कसरी संभव भयो ? हुनै नसक्ने कुरा हो यो । तर यदि तपाई ‘ड्राइभ थ्रु’ कार्यक्रम गरी बिहे गर्नु सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिंदै उनीहरुले त्यस्तो नौलो तरिकाले विवाह गरेका हुन् । यसरी भएको विवाह हो । आइतवार बिहान नवविवाहित जोडी मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरदेखि दक्षिणमा पर्ने पुत्रजायास्थित एउटा विशाल सरकारी भवनबाहिर बसे । अनि अतिथिहरू आआफ्ना कारलाई बिस्तारै गुडाउँदै नवदम्पतीको छेउबाट गुज्रिए । पाहुनाहरूले गाडीको सिसा बन्द गरेको हुनुपर्दथ्र्यो र उनीहरूलाई टाढैबाट हात हल्लाएर स्वागत गरिएको थियो ।
दुलहा तेङ्ग्कु मुहम्मद हाफिज र दुलही ओसीन अलागिआको विवाह यसरी अत्यन्तै नौलोे पाराले गरिएको छ पनि अरू जोडीजस्ता पक्कै थिएनन् । दुलहा हाफिज मलेसियाका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तथा पूर्वमन्त्री तेङ्ग्कु अदनानका छोरा हुन् । ‘आज बिहानदेखि यहाँ १० हजारभन्दा बढी कार आएको मलाई जानकारी गराइएको छ’ समारोहका तस्वीर शेयर गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुलाहाका बाबु अदनानले लेखेका छन् ।‘म र मेरो परिवार एकदमै सम्मानित महसुस गरिरहेका छौँ । समस्या बुझिदिएकोमा र सबै नियमको पालना गर्दै कारबाट नओर्लिकनै सहभागी भइदिएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ ।’ उनले लेखेका छन् ।
सबै दश हजार निम्तालुलाई त्यसरी कारबाट नओर्लिकन नवदम्पतीको छेउबाट गुज्रिन करिब तीन घण्टा लागेको थियो। खुशी देखिएका दम्पतीबाट भने बिस्तारै अघि बढिरहेको ट्राफिकमा रहेका निम्तालुहरूले केवल अभिवादनमात्र होइन स्वादिष्ट डिनरको मौका पनि पाएका थिए ।
मलेशियाली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कारको झ्यालबाट उनीहरूले पहिल्यै प्याकिङ्ग गरिएका खानेकुरा पाएका थिए । दुलहाका राजनीतिज्ञ बुवा पाँच लाख डलर बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई जरिवाना तिर्नुपर्ने र १२ महिना जेल बस्नुपर्ने सजाय पाउनुभन्दा एक दिनअगाडि यो समारोहको आयोजना गरिएको थियो । स्मरणरहोस् मलेशिया अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको नयाँ लहरसँग जुझिरहेको छ।
हालसम्म त्यहाँ ९२,००० व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने कोभिड १९ सँग सम्बन्धित कारणले ४३० जनाको मृत्यु भएको छ।